Indonesia wazibonela uhamba bakhangwa ithuba ukuhlanganisa izinhlobo eziningana lokuzilibazisa. Lapho ukuthamela ilanga usuku lonke elangeni elishisayo noma uvakashele izinkambo ethnological yomlando, ukuyobhukuda noma izintaba, ukubukela izilwane zasendle noma ujabulele ubuhle bemvelo.
Izikhangibavakashi Indonesia, lapho sifuna ukukutshela kulesi sihloko kuyoba nesithakazelo kubo bonke abanakekela mayelana yokuphila nangomlando walelo zwe. Ngokulandelayo, sizogxila kumasayithi alandelayo:
Izikhangibavakashi Batam isiqhingi.
Eziqhingini Komodo futhi Bali.
Ubud, etholakala engxenyeni ephakathi ye-Bali, akakwazi ngokuthi resort evamile. Leli dolobha mlando ubhekwa maphakathi yezandla lasendulo namasiko kazwelonke. Ubucwebe Gallery, woodcarving futhi batik igalari balondoloze futhi zokudoba cultured, okuyinto oziqhenya ye-Indonesia. Ubud, ogama ezikhangayo azigcini yezandla kwezobuciko, is kulo lonke sibonga ezweni kuze kufike endaweni ebekelwe "Monkey Ihlathi" ezaziwayo.
Lokhu epaki elincane iyikhaya inkampani kunalokho ophambukayo futhi etotoswayo ukunakwa izimfene. abasebenzi Reserve ukuncoma izivakashi ukuqapha eduze izinto zabo ezibonakalayo futhi imihlobiso, njengoba izilwane okwakusobala ejwayele arrogate ngokwayo ubunikazi abahambi zokunganaki.
Ukulula phezu izindlela ukhonkolo, ungakwazi siyakhubeka ku elivumelekile "Temple of the Dead", okuyinto ubheka bendawo kanye nomsunguli wobubi amandla emimoya. Futhi epaki eqoqwe izitshalo eziningi ezinhle futhi ongaziwa. Ngokuqinisekile bayoba Ongoti nesithakazelo ye izitshalo zendawo.
Izikhangibavakashi Batam Isiqhingi (Indonesia)
Kuze kube sekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, le ngxenye yezwe obuncane sezwe baqoqene abampofu okudotshwa. Kusukela ngaleso sikhathi, isiqhingi lithole isimo khulula ukuhweba zone, kwenziwa ngokushesha wenyukela entabeni. Manje nangu sezindiza yesimanje, kwakukhona ingqalasizinda evuthiwe futhi ezihlukahlukene amahhotela.
Ukukhuluma ezikhangayo Indonesia, ingasaphathwa amabhuloho Barelang ezenza komunye nomunye a iziqhingi ezimbalwa angomakhelwane. By endleleni, igama befika kusukela amaqoqo lokuqala amagama kakhulu kuzo zonke lezi ziqhingi: Batam futhi Galang Rempang. Ubude Imininingwane zalezi zakhiwo ingamakhilomitha angu amabili kude, futhi ngayinye amabhuloho eziyisithupha wanikezwa igama noyedwa kubabusi bendawo, owayehlala lapha emakhulwini 15-17.
Izikhangibavakashi ka kulo muzi ophithizelayo zahlukahlukene kakhulu futhi kukhanga izinkulungwane nsuku zonke zezivakashi nabathandi bendawo. Bonke uvumele ukuzizwa emkhathini Jakarta futhi shí ke siyachithwa ngokuphuthuma. Okokuqala, ochwepheshe batusa ukuba uvakashele Ethnography Park "Taman Mini", okuyinto idale indawo enkulu Indonesia in yesikhumbuzo. Lapha uzothola emadokodweni 27, ngalinye elikwazi liyakhuluma ngokuphela nezinye izifundazwe futhi ibonisa izivakashi izinto Folk ukuphila. Uma uya epaki Anchole amaphupho, ungavakashela emakethe ubuciko uyithenga batik, isikhumba izimpahla, izinto eziyizikhumbuzo ezenziwe ngokhuni bone, kanye umsebenzi abaculi bendawo. Jakarta liyaziwa iminyuziyamu zayo eziningi ukuthi ukwethula izivakashi umlando wezwe kanye namagugu amasiko alo.
Uma uphatha ukuya esiqhingini exotic okuyimfihlakalo Java, qiniseka ukuthi uvakashela edumile ethempelini. Zonke ezikhangayo Indonesia, Ephakathi zihlukaniswa ubuhle nomusa, kodwa ibizwa iparele prambanan kuleli zwe. Iningi izakhiwo zethempeli, ngeshwa, sekonakele. Okwamanje, izivakashi zibonisa nemibhoshongo Hindu futhi Buddhist amathempeli, okuyinto wabuyiselwa ekuqaleni kwekhulu lama-20, abacwaningi-Dutch. Emaphakathi ingxenye eziyinkimbinkimbi abhekwa ezintathu ethempelini, okuyinto abendawo ukubiza "Lara Dzhongrang", okungase lihunyushwa ngokuthi 'intombi mancane. " Bonke ahlotshiswe imidwebo amahle on isihloko Indian amaqhawe "Ramayana" ku impumuzo itshe. Khona-ke ungakwazi ukuhlola amathempeli amancane futhi uzwe kusukela Umhlahlandlela indaba yothando echaza umsuka kule ndawo.
Esikhathini ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi esiqhingini edonsela qakala ubuhle bemvelo izivakashi kanye bendawo. Botanical Garden Eka Karya, bebuthene emazweni awo kwaziwa futhi izitshalo ezingavamile, okuyinto idume Indonesia. Bali Kuyaziwa izimpawu zomhlaba emhlabeni wonke, uyaziqhenya kube esiqiwini. Shono endaweni engadini ubhekwa iholidi lomkhaya, lapho abantu bendawo beza uphumule ngosuku. Ngaphezu kwalokho, kukhona isikhungo sina isifundo kanye nokongiwa izitshalo, okuholela umsebenzi ezibanzi zemfundo. National Park lihlukile ukuthandwa ngokwami ukuthi izivakashi ungathola lapha umthamo omuhle adrenaline. Iqiniso ukuthi Botanical Garden itholakala nokuzidela Ipaki Bali isihloko, okuyinto has ikhebula izimoto, Bungee, ukumiswa amabhuloho nokunye okuningi. Ungakhetha indlela yanoma yimuphi yinkimbinkimbi futhi uhlangabezana eziningi ukuzwa egqamile.
Izikhangibavakashi Indonesia, incazelo zazo zingatholakala kuyo yonke indawo, ikakhulukazi eziphathelene edumile esiqhingini Bali. Nokho, njengoba ingxenye yaleli isimo enkulu inobungako eziqhingini ezincane, okuyinto abadumile flora eliyingqayizivele nezilwane ezihlukahlukene. amaphuzu engeziwe bungabonakala Komodo, okuyinto likhona kazwelonke epaki kwemvelo futhi ivikelwe UNESCO. Lona lapho ungabona inzalo ka isibankwa komlando, okuyinto evame ukubizwa ngokuthi "isiqhingi Komodo Dragons." Ngokuthakazelisayo, bendawo namanje ngihloniphe izibankwa emangalisayo futhi ukholwa imvelaphi yabo imilingo. Bona wapha izilwane ezidla ezinye, ngaleyo ndlela ukuqinisekisa ukuphepha kwabo futhi ukuphepha izivakashi. Izilwane, esikhundleni salokho, uzizwe ungumqemane abazange bayakugwema umphakathi wabantu. Abavakashi sondelani ukubona indlela yokuzingela izibankwa noma, yini ebonakala mnandi kubo, ukuthola ubuhlobo nomunye.
Safari Park kanye Marine Park Bali
Indonesia ezikhangayo zihlanganisa ezihlukahlukene sites yemvelo kanye zasolwandle. Ngo-2007, esiqhingini Bali yaceba ngu nangenye indaba ephathwayo epaki, okuyinto ngokushesha yatha- waba omunye ezivakashelwa kakhulu. I safari futhi epaki zasolwandle siphile zinhlobo mayelana 80 400 zezilwane ezimweni ukuthi basondelene kakhulu nemvelo. Lapha ungavakashela show khulula nezilwane, bheka izindlovu ukugeza, kanye nokwethulwa kwe-tiger Balinese. Ezinganeni khona ivuliwe siqu ipaki, lapho bangakwazi ukugibela bendabuko carousel ride on ithoyizi izimoto ibhande ezihambayo, ukuvakashela Luhambo, ingwane, ukugibela amaslayidi amanzi epakini amanzi ukuzwa obupholile roller coasters. Leli dolobhana kazwelonke etholakala epaki, ungafunda dance Balinese yangempela, futhi usuku off ukubona umbukiso umdanso. Ekupheleni nohambo ungakwazi ukuhlola ezikhangayo engokwemvelo Indonesia, ujabulela safari ku izindlovu, ebhasini noma ukugibela bendabuko tram epaki.
Siye sazama ukukutshela konke mayelana ezikhangayo esemqoka ye-Indonesia. Uhlu kulezi zindawo ezimangalisayo ungaya ku isikhathi eside kakhulu: West Bali National Park, Batubulan, Borobudur, nokunye. Nokho, akunakwenzeka ukuchaza kwelinye sihloko zonke izakhiwo zethempeli, amapaki kazwelonke, amachibi amahle ehlathini zasendle. Emhlanganweni ngamunye iziqhingi ayizinkulungwane eziyisithupha ezihlala abantu Indonesia ungathola yena into ezithakazelisayo futhi ekhangayo. izivakashi Ngakho abanolwazi Kunconywa ngaphambi kokuhamba ukwenza kwepulani ukuvakashela izinto ezithakazelisayo kunazo e-Indonesia.
I-A-One Star Hotel, i-Pattaya: incazelo yamakamelo ehhotela, ukubuyekezwa
Wisteria edolobheni - ezihlukahlukene entsha
Battle ku iNeva emfuleni: Izimbangela Nemiphumela